ကလေးသူခိုးကို..စွန့်စွန့်စားစား လုံးထွေးသတ်ပုတ် ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ ရေနံချောင်းမြို့က သတ္တိခဲ မိန်းမပျိုလေး. . . (ရုပ်သံ ကြည့်ရန်) - Lucky7Media
Lucky7Media
ကလေးသူခိုးကို..စွန့်စွန့်စားစား လုံးထွေးသတ်ပုတ် ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ ရေနံချောင်းမြို့က သတ္တိခဲ မိန်းမပျိုလေး. . . (ရုပ်သံ ကြည့်ရန်)
admin · Posted on November 28, 2019 November 28, 2019
ရေနံချောင်းမြို့တွင် ကလေးသူခိုးအား ကလေးခိုးနေစဉ် လက်ပူးလက်ကြပ်ဖမ်းဆီးရရှိမှု ဖြစ်ပွား. . ။
၂၀ဝန်းကျင် လူငယ်လူရွယ် မိန်းမပျိုလေးများ နှင့် ကလေးသူငယ်များ မကြာမကြာ ပျောက်ဆုံးနေမှုဟာ မြို့နယ်ဒေသ အတော်များများမှာ ခပ်စိပ်စိပ်ကြားနေရပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ကလေးသူငယ်များနှင့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူလေးများ အပါအဝင် မိမိ၏ သားသမီးရင်သွေးရတနာများကို သွားသတိ လာသတိနှင့် ရှိစေဖို့ ကြပ်မတ်ဂရုစိုက်ပေးကြပါနော်။
တာဝန်ရှိသူများနှင့် ပြည်သူအပေါင်းတို့ စုပေါင်းညီညာစွာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှသာလျှင် အနာဂတ်ပန်းကလေးများဖြစ်သော ကလေးငယ်များဟာ ပန်းကောင်းအညွှန့်ကျိုး မဖြစ်ဘဲ ကောင်းမွန်စွာ လန်းဖြာလာနိုင်မှာပါနော်. . ။
ဒီနေ့ ရေနံချောင်းမြို့ညောင်လှရပ်ကွက်တွင် ကလေးငယ်အား အိမ်ထဲသို့ ဝင်ရောက်ခိုးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ကလေးခိုးသူအားလည်း ဖမ်းမိထားကြောင်းကြားသိရပါတယ် ။
ဒီကလေးခိုးယူတဲ့ ကလေးသူခိုးကို ဝိုင်းဝန်း ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ရာမှာတော့ အာဂသတ္တိနဲ့ ရဲရင့်လှတဲ့ မိန်းမပျိုလေးတစ်ဦးရဲ့ မကြောက်မရွံ့ ဝင်လုံးတိုက်ခိုက်မှုဟာ တကယ့်ကို အံ့သြလေးစားဖွယ်ရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကယ်ကြပါအုံး ကူကြပါအုံးဆိုတဲ့ အသံကြားတာနဲ့ မိန်းကလေးမို့ မဝင်ဖို့ တချို့သူတွေ တားဆီးနေတဲ့ကြားထဲက
သတ္တိရှိရဲရင့်စွာ ကလေးသူခိုးလက်ထဲကနေ ကလေးငယ်ကို အဦးဆုံး ဝင်ရောက်လုံးထွေး ကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့ မိန်းမပျိုလေးကို ထိုက်တန်စွာ ဂုဏ်ပြုချီးမြှောက်သင့်လှပါတယ်။
ရေနံချောင်းသူရေနံချောင်းသားများဖြစ်ကြသော မြို့မိမြို့ဖများ. .ကလေးသူခိုးအား အများမြင်သာအောင်ပြစေပြီး ပြစ်ဒဏ်ကိုလည်း ကြီးလေးသောပြစ်ဒဏ်ပေးစေလိုပါကြောင်း အဆိုပြုပါသည် ကလေးသူခိုးအားလည်းပုံနင့်တကွ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည် ။
ရေနံချောင်းမြိုနယ် ညောင်လှရွာသစ် ရက်ကွက် ကျောင်းဆင်းချိန်မှာ ကလေးကို နောက်ကလိုက်ပြီး အိမ်ထဲထိ ဝင်ရောက်ဖမ်းပြီး ကလေးလည်ပင်းကို ညစ်တဲ့ ကလေးသူခိုးပုံပါ ။
(ကလေးသူခိုးအား ရဲဝံ့စွာ ရင်ဆိုင်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ ဂုဏ်ပြုထိုက်တဲ့ အာဂမိန်းမပျိုလေး ရုပ်သံ)
ကလေးသူငယ်များနှင့် လူပျောက်မှုများ ထပ်မံမဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် မိမိညီအစ်ကို မောင်နှမနှင့် နီးစပ်ရာတိုင်းကို လက်လှမ်းမီသမျှ ပူးပေါင်းကာကွယ်ပေးကြဖို့လည်း တိုက်တွန်းကြရင်း ကိုယ်တိုင်လည်း တက်ကြွစွာ ဝိုင်းဝန်းကာကွယ်ကြပါစို့။
(ကလေးသူခိုးအား ဖမ်းဆီးရရှိထားမှု ရုပ်သံ )
၁၄ ယောက်အဖွဲ့လို့လည်းသိရပါတယ် မေးတော့လည်း သေရင်သေပါစေ မပြောဘူး လို့လည်းပြောပါတယ် အားလုံးအစစ အရာရာ ကလေးတွေကို ဂရုစိုက်ကြပါ ။
တာဝန်ရှိသူအပေါင်းနှင့် ဆရာ/ဆရာမများ ၊မိဘပြည်သူများ အားလုံးပူပေါင်းကြပြီး ကျောင်းကျူရှင်များ၊ရပ်ကွက်နှင့် လူစည်ကားရာနေရာများမှာလည်း သတိပေးစာများ ကပ်ကာ သတိပေး နှိုးဆော်ထားကြသင့်ပါပြီနော်။
ရနေံခြောငျးမွို့တှငျ ကလေးသူခိုးအား ကလေးခိုးနစေဉျ လကျပူးလကျကွပျဖမျးဆီးရရှိမှု ဖွဈပှား. . ။
၂၀ဝနျးကငျြ လူငယျလူရှယျ မိနျးမပြိုလေးမြား နှငျ့ ကလေးသူငယျမြား မကွာမကွာ ပြောကျဆုံးနမှေုဟာ မွို့နယျဒသေ အတျောမြားမြားမှာ ခပျစိပျစိပျကွားနရေပါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ ကလေးသူငယျမြားနှငျ့ ကြောငျးသား/ကြောငျးသူလေးမြား အပါအဝငျ မိမိ၏ သားသမီးရငျသှေးရတနာမြားကို သှားသတိ လာသတိနှငျ့ ရှိစဖေို့ ကွပျမတျဂရုစိုကျပေးကွပါနျော။
တာဝနျရှိသူမြားနှငျ့ ပွညျသူအပေါငျးတို့ စုပေါငျးညီညာစှာ ကာကှယျစောငျ့ရှောကျမှသာလြှငျ အနာဂတျပနျးကလေးမြားဖွဈသော ကလေးငယျမြားဟာ ပနျးကောငျးအညှနျ့ကြိုး မဖွဈဘဲ ကောငျးမှနျစှာ လနျးဖွာလာနိုငျမှာပါနျော. . ။
ဒီနေ့ ရနေံခြောငျးမွို့ညောငျလှရပျကှကျတှငျ ကလေးငယျအား အိမျထဲသို့ ဝငျရောကျခိုးမှုဖွဈပှားခဲ့ပွီး ကလေးခိုးသူအားလညျး ဖမျးမိထားကွောငျးကွားသိရပါတယျ ။
ဒီကလေးခိုးယူတဲ့ ကလေးသူခိုးကို ဝိုငျးဝနျး ဖမျးဆီးနိုငျခဲ့ရာမှာတော့ အာဂသတ်တိနဲ့ ရဲရငျ့လှတဲ့ မိနျးမပြိုလေးတဈဦးရဲ့ မကွောကျမရှံ့ ဝငျလုံးတိုကျခိုကျမှုဟာ တကယျ့ကို အံ့သွလေးစားဖှယျရာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ကယျကွပါအုံး ကူကွပါအုံးဆိုတဲ့ အသံကွားတာနဲ့ မိနျးကလေးမို့ မဝငျဖို့ တခြို့သူတှေ တားဆီးနတေဲ့ကွားထဲက
သတ်တိရှိရဲရငျ့စှာ ကလေးသူခိုးလကျထဲကနေ ကလေးငယျကို အဦးဆုံး ဝငျရောကျလုံးထှေး ကယျတငျပေးခဲ့တဲ့ မိနျးမပြိုလေးကို ထိုကျတနျစှာ ဂုဏျပွုခြီးမွှောကျသငျ့လှပါတယျ။
ရနေံခြောငျးသူရနေံခြောငျးသားမြားဖွဈကွသော မွို့မိမွို့ဖမြား. .ကလေးသူခိုးအား အမြားမွငျသာအောငျပွစပွေီး ပွဈဒဏျကိုလညျး ကွီးလေးသောပွဈဒဏျပေးစလေိုပါကွောငျး အဆိုပွုပါသညျ ကလေးသူခိုးအားလညျးပုံနငျ့တကှ ဖျောပွပေးလိုကျပါသညျ ။
ရနေံခြောငျးမွိုနယျ ညောငျလှရှာသဈ ရကျကှကျ ကြောငျးဆငျးခြိနျမှာ ကလေးကို နောကျကလိုကျပွီး အိမျထဲထိ ဝငျရောကျဖမျးပွီး ကလေးလညျပငျးကို ညဈတဲ့ ကလေးသူခိုးပုံပါ ။
ကလေးသူငယျမြားနှငျ့ လူပြောကျမှုမြား ထပျမံမဖွဈပျေါစရေေးအတှကျ မိမိညီအဈကို မောငျနှမနှငျ့ နီးစပျရာတိုငျးကို လကျလှမျးမီသမြှ ပူးပေါငျးကာကှယျပေးကွဖို့လညျး တိုကျတှနျးကွရငျး ကိုယျတိုငျလညျး တကျကွှစှာ ဝိုငျးဝနျးကာကှယျကွပါစို့။
၁၄ ယောကျအဖှဲ့လို့လညျးသိရပါတယျ မေးတော့လညျး သရေငျသပေါစေ မပွောဘူး လို့လညျးပွောပါတယျ အားလုံးအစစ အရာရာ ကလေးတှကေို ဂရုစိုကျကွပါ ။
တာဝနျရှိသူအပေါငျးနှငျ့ ဆရာ/ဆရာမမြား ၊မိဘပွညျသူမြား အားလုံးပူပေါငျးကွပွီး ကြောငျးကြူရှငျမြား၊ရပျကှကျနှငျ့ လူစညျကားရာနရောမြားမှာလညျး သတိပေးစာမြား ကပျကာ သတိပေး နှိုးဆျောထားကွသငျ့ပါပွီနျော။
Celebrity, Knowledge, News, Uncategorized
© 2020 Lucky7Media